သစ္စာတရားရှာဖွေရာ၌ တိကျသောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ လိုအပ်ခြင်း | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← နိဗ္ဗာန်နှင့်ပတ်သက်၍ Epistemological Problem မရှိခြင်း
သစ္စာတရားရှာဖွေရာ၌ တိကျသောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ လိုအပ်ခြင်း(၂) →
အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များသည် အရာရာ၌ လိုအပ်သည်သာဖြစ်သည်။
သိပ္ပံပညာ၏ ကျော်ဇောထင်ရှားမှု အများလက်ခံမှုနှင့် အောင်မြင်မှု၏ အခြေခံထဲတွင် တိကျသော အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်များ ရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်။ ဥပမာ – ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ် ပညာမှ လွန်စွာနာမည်ကြီးသော မသေချာမှုနိယာမ (Uncertainty Principal) ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သူ ဟိုက်ဇင်ဘတ် (Heisenberg) သည် သိပ္ပံနှင့် ပတ်သက်၍ ဤသို့ တိတိကျကျ ပြောခဲ့ဖူးသည် –
.. .. Any use of the words ‘position’ and ‘velocity’ with an accuracy exceeding that given by the Uncertainty equation is just as meaningless as the use of words whose sense is not defined .. ..
ဟိုက်ဇင်ဘတ်၏ ဆိုလိုချက်မှာ – မသေချာမှုနိယာက ကန့်သတ်ထားသော အဝန်းအဝိုင်းထက် ကျော်လွန်၍ တိကျသေချာမှုကို လိုအပ်သူများသည် စကားလုံးများအား အဓိပ္ပာယ် မဖွင့်ဆိုဘဲ သုံးနှုန်းသကဲ့သို့ ဖြစ်ပေလိမ့်မည် – ဟူသော သဘောပင်ဖြစ်သည်။
စာရေးသူ ဆိုလိုသည်မှာ စကားလုံးများကို အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုခြင်းသည် လွန်စွာလိုအပ်လှသည်။ .. .. as meaningless as the use of words whose sense is not defined .. .. ဟူ၍ သုံးနှုန်းခဲ့သည်မှာ လွန်စွာမှတ်သားဖွယ်ရာ ကောင်းသည်။
ယခုအခါ တရားရှုသည်ဟုဆိုလျှင် – ရှုသည်ဆိုသည်မှာ မည်သို့ပါနည်းဟု မေးပါအံ့ – အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် (တရားရှုတာပဲဗျာ – ခင်ဗျားက ဒီလောက်စိစစ်နေရသလား?) ဟု ပြန်လည် တုန့်ပြန်တတ်သည်။ ရှုခြင်းဆိုသည်မှာ အနိစ္စလက္ခဏာ တင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အပျက်ဆင်ခြင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယောဂီများသည် ဤစကားလုံးများအား တိတိကျကျ သိနားလည်လျှင် ပို၍ကောင်းသည်။
ဥပမာ – သမာထဆိုသည်မှာ စိတ်၏တည်ငြိမ်ရန် ကြိုးစားခြင်း။ ဝိပဿနာဆိုသည်မှာ ထိုစိတ်ကို အပျက်ရှုသော ဉာဏ်၏ တည်ငြိမ်ရန် ကြိုးစားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤသို့ သဲသဲကွဲကွဲ အဓိပ္ပာယ် ပြဌာန်းထားနိုင်မှသာလျှင် တရားအားထုတ်ရာ၌ အလုပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ စာရေးသူတို့သည် များစွာအားထုတ်ခဲ့သည်တော့မူ မဟုတ်ဟု ပြောလျှင် ရပါသည်။ သို့သော် စကားလုံးများကို တိတိကျကျ သိနားလည်သဖြင့် တရားအားထုတ်ခြင်း ဆိုတာ မည်သို့၊ ရှုသည်ဆိုတာ မည်သို့၊ ဘာကိုရှုရသည်ဆိုတာ မည်သို့၊ ဘာနှင့်ရှုရသည်ဆိုတာ မည်သို့၊ မရှုသေးမီ မည်သို့၊ ရှုပြီးလျှင် မည်သို့ဟူ၍ အခြေအနေများကို သိနားလည်သောအခါ အလုပ်လုပ်ရာ၌ လွန်စွာ တွင်ကျယ်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်လည်း ထူးထူးခြားခြား သိမြင်ပေါက်ပိုင်မှုများ ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယောဂီများသည် တိတိကျကျ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုကို နားလည်အပ်လေသည်။ သိပ္ပံပညာသည် ထိုသို့နားလည်သဖြင့် စနစ်တကျ တင်ပြနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်၌ သြဇာလွှမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဝိုးတိုးဝါးတားဆိုလျှင် အဆင်မပြေချေ။
ထို့ကြောင့် ဝေါဟာရများကို တိတိကျကျ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုရမည်၊ ဥပမာ- တရားထုတ်သည်ဆိုလျှင် တရားရနိုင်ရန်၊ မိမိရှိသော အင်အားများအား ထုတ်လုပ်နေရမည်။ တရားအားထုတ်သည်ဆို၍ ဘုရားစင်ရှေ့၌ ငုတ်တုတ်ကလေး တင်ပလ္လင်ခွေထိုင် သို့မဟုတ် ဒူးတုပ်ထိုင်ကာ “ငါ့ခြေထောက်တွေ နာတယ်” “ငါ့ခြေထောက်တွေ နာတယ်” ဟုအောင်းမေ့နေလျှင် တရားအားထုတ်ခြင်း မမည်နိုင်ချေ။
ထို့ကြောင့် အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်များသည် လွန်စွာမှ အရေးပါ အရာရောက်ကြောင်း ဝိပဿနာကျင့်စဉ် လုပ်ငန်းခွင်၌ တင်ပြလိုပါသည်။
အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း ဘာသာရေးဟူသမျှသည် လက်တွေ့မပါ၊ အသိပညာ အမှန်အကန် မပေးဟု အော်ဟစ်နေသော အချိန်တွင် – မိမိတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာမူ လက်တွေ့ကျင့်ရသည်ကို ထင်ထင်ရှားရှား ဖေါ်ထုတ်သင့်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အားလုံးသည် လက်တွေ့ကျင့်ခြင်းကို အားပေးသင့်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကြည်ညိုသော ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည် လက်တွေ့ကျင့်ခြင်းကို အားပေးမြှောက်စားရမည်။ သို့သော် မှန်ကန်ရန် စနစ်တကျ ရှိရန်သာ ထိန်းကွပ်ပေးရန် လိုအပ်သည်ဟု မြင်မိပါကြောင်း တင်ပြလိုပါသည်။
Tags: Buddhism and Science, Myanmar Posts, ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်, မသေချာမှုနိယာမ, အနိစ္စ
This entry was posted in Buddhism & Science and tagged Buddhism and Science, Myanmar Posts, ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်, မသေချာမှုနိယာမ, အနိစ္စ. Bookmark the permalink.
One Response to သစ္စာတရားရှာဖွေရာ၌ တိကျသောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ လိုအပ်ခြင်း
ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာ မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ မသိနိုင်တာတွေ သိနိုင်တယ်လို့ နားလည်မိပါတယ်။ ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာလည်း မှန်ကန်တိကျစွာ လမ်းညွှန်ပေးနိုင်တဲ့ ဆရာကောင်းလိုအပ်တယ်လို့ ခံယူမိပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ သဘောတရားတစ်ခုကို တိကျတဲ့ လက်တွေ့နဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်မယ် ဆိုပါက ထူးမြတ်တဲ့ အမြိုက်အရသာကို ဧကန်မုချ ရမှာပါပဲလို့ လက်ခံမိပါတယ်။